Umkhiqizi Wasekhaya, Umhlinzeki, Ifektri - izinciphisi, izinciphisi zezikelemu, amabhokisi ama-worm, amabhokisi wamagiya aseplanethi, izinciphisi zejubane, okuguquguqukayo, amagiya asizayo, amagiya wentsimbi ye-sprial, amabhokisi wamagiya ezolimo, amagiya kagandaganda, amagiya weloli, u-gearbox wesibungu
Izikhungo ze-HZPT zidlule isitifiketi se-ISO 9001. Izikhungo zethu zokukhiqiza zidlule isitifiketi se-TS 16949.
Sebenzisa imiqondo emincane ukuqamba kabusha izinqubo zebhizinisi ukuqeda izinyathelo ezingezona zenani elongeziwe
Sungula ubambiswano kusuka kumakhasimende kuya kokuthengiswayo
+ Ukubuyela emuva okuphansi kwesigcawu se-servo worm
+ Ukuhluka kwejubane le-UDL
+ Isinciphisi sesibungu
+ Ama-cycloidal gear reducers
+ Ibhokisi legiya lemishini yezolimo
+ Amabhokisi wamagiya aseplanethi
+ Ama-motors alungiselelwe i-Helical
+ Ama-motors womoya we-spiral bevel
+ Intulo jacks
+ Ama-gearbox wama-tracors nokuzenzakalelayo
+ Izinciphisi ezikhethekile namabhokisi wamagiye
+ Ama-gearbox wohlelo lokunisela
+ Abasebenza ngeWorm & Bevel Gear
+ Ama-motors amancane we-DC amancane
+ Transmission System for TMR lokuxhuba
+ Ama-Reducer Gear
+ Ukunciphisa kwe-SMR Shaft
+ Abathwali beplanethi
+ Amagiya endandatho
+ Amagiya endandatho ye-Helical
+ Umehluko amagiya
+ Imiphini ye-Spline nemiphini yamagiye
+ Spur amagiya & amagiya helical
+ Amagiya ezikelemu nezikelemu
+ Amagiya wotho & amagiya wensimbi angabibikho
+ PTO Imiphini
+ Amagiya kagandaganda
+ Amagiya weforklift
+ Ama-gear gear
+ Amagiya amaphampu kawoyela
+ Indandatho ye-Slewing / i-Slewing Bearing
+ Amapompo Gear
+ Igiya losizo
+ Umfutholuketshezi drive uhlelo
+ Izinjini zochungechunge ze-Y2
+ Izinjini eziwuchungechunge ze-Y
+ YD uchungechunge multi-speed izinjini
+ Izinjini zochungechunge lwe-YS
+ Ama-motors ochungechunge lwe-YC YL
+ Izinjini ze-YEJ
+ Izingxenye zomduli
+ TYGZ izinjini ezivumelanisiwe
+ Izinjini ezihambisanayo ze-TYBZ
+ Ama-servo motors
+ Ama-brush brush dc motors
+ Isithuthi se-Electirc
+ Ama-Rare-Earth-Permanent-Magnet motors (REPM MOTORS)
HZPT Unguchwepheshe ekwenzeni zonke izinhlobo zamagiya & ibhokisi lamagiya kanye nesinciphisi sejubane njenge: NRV isibungu (NMRV worm gearboxes), Casting iron speed worm reducer, in-line helical gear reducer, shaft parallel helical gear reducer, helical bevel reducers, helical i-worm gear reducer, isinciphisi se-backlash esisezingeni eliphansi, ama-gearhead we-engela angakwesokudla aphansi, amabhokisi wamagiya ezolimo, u-gearbox kagandaganda, u-gearbox ozenzakalelayo, amabhokisi wamagiya aseplanethi,…
Ukuhlanganisa ukuhweba, imboni kanye nobuchwepheshe sekukonke, iHangzhou Ever-power Machinery Co, Ltd ingumkhiqizi wokunciphisa isivinini waseChina nefektri yamagiya, sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni isivinini sokunciphisa isivinini, ibhokisi lamagiya, izinciphisi zamagiya afudumele namabhokisi wamagiye. Kunikezelwe ukuhlinzeka ngesixazululo esikhethekile, esisebenza kahle nesisebenza ngabantu.
Unipolar reducer WKS
I-WJ uchungechunge lwe-worm-gear reducer is novel, ukubukeka kuhle, kuncane, kusinda ekuphumeni isikhashana, ukudluliswa okuqinile kunakho, umsindo omncane onawo. Ingakwazi ukuhlangana nemishini kagesi noma i-derailleur engenazinyathelo ye-awl yeplanethi ye-UD ngqo, isakhiwo sihlangene. Ukukhishwa kwegiya lesibungu emgodini, ukuxubana komsebenzisi ukuthambekela nokuzikhandla kwe-asi kuphela, nakho kungaxuba ukuthambekela kokuzibandakanya futhi kusebenze i-asi, Kukhona ukuguquguquka okukhulu.
Ukunciphisa i-Cyclo Drive
Isivinini se-udl variators nmrv worm gear seed reducers cycloidal gear reducers casting iron worm gear reducers helical geared motors gearbox for yezolimo imishini yokuvunguza yotho igiya izinjini isinciphisi esikhethekile
Amayunithi egiya le-Servo worm anezinhlobo ezintathu: 45 - 50 - 55 - 63 - 75 - 90, enedrayivu emibili yokuhola isibungu. Kwesobunxele nangakwesokudla kwesibungu kusetshenziswa i-engeli eholayo ehlukile, okwenza ukujiya kwamazinyo kuguquke kancane kancane, Ukuze ukwazi ukuhambisa isibungu shaft bese ulungisa ukubuyela emuva.
Sizibophezele ekwenzeni ngcono izimpilo zabantu kanye nemvelo ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokuphatha bokukhiqiza obunokwethenjelwa, obuphumelelayo nobuphephile
Izinkampani ezihlinzeka ngale mikhiqizo nezinsizakalo zithembele kithina ukusiza ukuxazulula izinselelo ezinzima kakhulu zokuphathwa kwamandla kagesi, ama-hydraulic, kanye nemishini emhlabeni. Ngoba asisoze sakhohlwa izinto ezibalulekile. Kungumsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuthi isebenza kahle.
Ingqikithi yendawo yefektri
Unjiniyela we-R & D onguchwepheshe
Inkampani inamathela enhlosweni yokuphatha yekhwalithi yokuqala, udumo oluphakeme.
Ukusekelwa kwensizakalo ye-24 × 7 kungenye yezinsizakalo ezihamba phambili enkampanini.
Ukuxhaswa kwezinsizakalo ezingama-24 × 7 okunikeza ngezinsizakalo ezisezingeni nganoma isiphi isikhathi, noma kuphi emhlabeni.
Ngemininingwane engaphezulu, sicela uhlole imikhiqizo yethu ikhathalogi nezinhlu zemishini.
Thola imininingwane yezobuchwepheshe ukukhetha nokuthenga umkhiqizo
Sizosiza ngokufakwa nokuthunyelwa emkhakheni.
Lungisa / Buyisela
Xilonga izinkinga bese uthola izindlela zokulungisa.
YINI UKUTHOLAKALA KWAMAGAZI, NGANOMA KUNJANI?
Emhlabeni wokudluliswa kwamandla kagesi, kunezingxenye eziningi ezihambayo, futhi izinto zingaba nzima ngokushesha. Ingxenye ebaluleke kakhulu yalezi zinhlelo ngamabhokisi wamagiya - imishini ehlanganisiwe edlulisa amandla kusuka kumgqugquzeli oyinhloko ukuya kumthwalo. Izinciphisi zamagiya yiyona nto eyinhloko okugxilwe kuyo le ndatshana.
Emishinini eyisithupha eyisisekelo, elula, amabhokisi wamagiya ngokuvamile asebenzisa isondo ne-ekseli kanye / noma isikulufa (isinciphisi sesibungu) ukwenza umsebenzi kahle ngokuthola inzuzo yokulungisa. Ama-Motors ngokuvamile aklanyelwe ukusebenza "ekuvukeleni ngeminithi" ethile noma ku-RPM futhi, kanti leli jubane lingalungiswa ngokusebenzisa AmaDrayivu Wemvamisa Eguquguqukayo, ezimweni eziningi kunenzuzo enkulu ukusebenzisa isethi, ilungiselelo elithile lokuqondisa ukulungisa lelojubane lokukhipha futhi ngaleyo ndlela kwandise i-torque.
Isibonelo, uma imoto iphenduka ngo-1800 RPM, futhi leyo moto ixhunywe ku-10: 1 igiya lokunciphisa, isinciphisi sizokhipha i-180RPM. Uma leyo moto inesilinganiso esigcwele se-torque isilinganiso esingu-30 lb.ft., khona-ke umphumela ovela ku-10: 1 reducer (kucatshangwa ukuthi isilinganiso sokusebenza kahle esingu-85%) kuzoba ngu-255 lb.ft. ukunikela ngokwanda okukhulu enanini lomsebenzi ongenziwa. Izicelo ezijwayelekile zalolu hlobo zizoba ngabadlulisi, lapho amandla wokungena edinga isivinini sokusebenza esithile kanye ne-torque eyandisiwe yokuhambisa izinto ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa kakhulu eJapan, e-United States, eJalimane, eningizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe nezifunda. Amakhasimende ethu afaka amakhasimende amaningi e-OEM asebenza ngemishini yokwakha. Sisebenzisane nezinkampani eziningi ze-Fortune 500 ukuze sibe ngomunye wabaphakeli bazo abaphambili eChina.
Sithumele imikhiqizo yethu kumakhasimende emhlabeni jikelele futhi sathola idumela elihle ngenxa yekhwalithi yethu yomkhiqizo ophakeme kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva. Samukela ngokufudumele amakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ukuthi axhumane nathi ukuxoxisana ngebhizinisi, ukushintshisana ngolwazi nokubambisana nathi.
thina abasebenzi abangaphezu kuka-1500 abasebenzi, futhi babe CNC imishini ukuvula kanye cnc izikhungo zomsebenzi.
singomkhiqizi nomhlinzeki ongcono kunabo bonke e-china, khetha abakhiqizi bekhwalithi, abahlinzeki, abathengisi ku-china-reducers.com
IMIBUZO EJWAYELEKILE MAYELANA NOKUTHOLA IZINCITHI ZEGEAR
Uma kukhulunywa ngezinhlelo ezibandakanya izinciphisi zamagiya, kunemibuzo emibili evame ukuvela.
"Ngisikhetha kanjani isinciphisi esihle somsebenzi wami"
“Enginakho manje akusebenzi kahle. Ngingaluthola kanjani uhlelo olungcono? ”
Yomibili le mibuzo ize ekubeni nomuntu onolwazi olufanele nesipiliyoni akusize ekwakheni uhlelo lwakho oluhle. Uma ungumsabalalisi, singathanda ukukhuluma nawe ngezidingo zakho zokunciphisa igiya, futhi uma udinga umsabalalisi, singathanda ukukuxhuma kulowo.
Izinciphisi zamagiya ziyinkimbinkimbi kepha ukukhetha okulungile akudingeki kube. I-HZPT inokukhethwa okubanzi kwekhwalithi ethembekile, ethembekile, engabizi kakhulu ezolingana nezidingo zezolimo, okuhlanganisiwe, uwoyela negesi, ukuphathwa kwempahla, ezokumbiwa phansi kanye nokunye!